Eyona Ivenkile yokuGcina ikwi-Intanethi
Omnye wabathengi bam ungena endleleni yokwenza intetho zentengiso kwaye wandicela ingcebiso izitikha zelaptop yelaptop yakhe kunye nokushiya ngasemva kunye nabathengi kunye nabaxumi bakhe. Ndiyakunyaniseka ukuba ndi-odole izitikha kwi-Intanethi kwaye kuphela kwezincamathelisi ezikumgangatho ophezulu endizifumeneyo ngexabiso elifanelekileyo kwaye notshintsho olukhulu Mule Isitikha.
Isitshixo ekukhetheni kwam sisincamathelisi esiza ngokulula ngaphandle kokuqhekeka kwaye sibe yingxaki enkulu. Ndihlala ndithenga izixhobo ezitsha kunye nezikhongozeli, kwaye ndihlala ndikhupha okanye ndithengisa ezakudala. Ukuba unesitikha esinexabiso eliphantsi, phantse akunakwenzeka ukuba ususe ngaphandle kweekhemikhali ezifanelekileyo. Isitika se-Mule sihlala sithumela izincamathelisi ezithi, nokuba kuyiminyaka kamva, zixobuke kwisiqwenga esinye esihle. Ndiyakholelwa ukuba indibaniselwano yomgangatho wabo wokuncamathela kunye nokuncamathelisa kwabo okwenza ukuba babe bahle.
Mule Isitikha: Izitikha zesiNtu
Mule Isitikha izitikha zibonakalisa into yokuthambisa ebakhusela ekuvezeni umoya, imvula kunye nelanga. Ungazifaka nakwi-dishwasher yakho kwaye ziphume zikhangeleka zintsha.
Mule Isitikha Yeyona ndlela ikhawulezayo neyona ilula yokuthenga iimveliso eziprintiweyo zesiko. Uku-odola kwimizuzwana engama-60 kwaye siza kuguqula uyilo lwakho kunye nemifanekiso ibe zizincamathelisi zesiko, iimagnethi, amaqhosha, iilebheli kunye nokupakisha ngeentsuku. Banikezela ngesiqinisekiso simahla kwi-Intanethi, ukuhanjiswa simahla kwihlabathi liphela, kunye notshintsho olukhawulezayo.
Mule Isitikha unikeza izitikha ze-vinyl, izitikha ezisikiweyo, izangqa zesangqa, izitikha zoxande, izitikha zesikwere, izitikha zeoyval, izitikha ezingqingqwa, amaphepha ezincamathelisi, izitikha zokuncamisana kokuncamisana, ukudlulisa izitikha, izincamathelisi zekona ezijikeleziweyo, izitikha ezicacileyo, itheyiphu yesiko, izixhobo zelebheli, iimagnethi , amaqhosha, kunye nokupakishwa kwetape.
Oda izitikha zakho ngemizuzwana kwaye ufumane ubungqina bange-intanethi simahla, ukuhanjiswa simahla kwihlabathi liphela, kunye nokujika okukhawulezayo okukhawulezayo.
Thenga izitikha ngoku
tags: ezona zitikha zilungileyo kwi-Intanethiizitikha zebumpermaqhoshaizangqa zesangqaCacisa izitikhaitheyiphu yesikoZinciphise izitikhaizitikha zokusikaizitikha ezisikiweyoabenzi belebheliizikhumba zeelaptopImagnethiizitikha ezilimbhoxoizitikha zoxandeizitikha zekona eziringiweyoizikhumba zefowuniizitikha zesikwereizitikha ezisikiweyo zokuncamisanaiimeyile zesitikaamaphepha ezincamathelisiizitifiketiukuhambisa izitikhaizitikha zeVinyl